I-23 intshi ye-16 iimbambo ubungakanani obukhulu bezambrela ezichanekileyo ngesiphatho segolide
Olu luhlobo lwe-indian oludumileyo lwesambrela esithe nkqo kunye nabathengi bokuprinta uyilo, ungayibona le yinto yokubamba ngombala wegolide, ithandwa kakhulu e-indian, umsebenzi ovulekileyo ozenzekelayo ulunge kakhulu.
Into NO.: OV10001A
Isibambo segolide esineembambo ezili-16 isambrela esikhulu.
Ngokuzenzekelayo ivulekile ngesiphatho segolide esigadileyo kunye neengcebiso zegolide.
Shaft yesinyithi emnyama kunye nembande yesinyithi 16ribs.
Iimbambo ezili-16 zenza isambrela somelele ngakumbi. Ngesiphatho semibala segolide kunye noyilo olwenziwe ngokwezifiso, isambrela sijongeka njengokuzonwabisa ngakumbi.
Egqithileyo Ngokuzenzekelayo i-Curve Hook Handle Handle Stick Alu Umbrella
Okulandelayo: 3m * 8ribs Luxury enamavili angaphandle folding cantilever parasol igadi isambrela
Straight Handle Golf Iambrela
IiHambrela eziPhethe ngqo
Imvula ethe tye Umbrella
Ovida oluzenzekelayo 23inch ngqo plas elide ecacileyo ...
Ovida Rhoqo Mthubi Mhlophe Multi-umbala Wood ...
I-Ovida yePlastiki yabafazi yeMbambo ecacileyo yemvula ...
Ovida totes Auto Vula Wooden Handle J Intonga Umb ...
Ovida intonga isambrela oluzenzekelayo clea ngaphaya ...
Ovida intonga aluminiyam elide promotiona engangenwa ...
Isambrela soKhuseleko oluNgenawo umoya, Isambrela esisesikweni, Isambrela esenzelwe wena, Iisambrela zesiko lesiqhelo, Umbrella wemvula, Ukusongelwa kwangaphandle,